Axad, Juun 8, 2007 Khamiis, Juun 18, 2015 Douglas Karr
Hamelife waa baloog loogu talagalay waalidiinta doonaya inay ka duwanaadaan. Waalidnimadu waa wax ii dhow oo aan ku jeclahay. Waxaan leeyahay hal wiil oo ka bilaabanaya IUPUI dayrta iyo gabadh dhigata dugsiga dhexe.
Waxaan ahaa aabbe da 'yar waxaana suura gal ah inaan sameeyo khalad kasta oo waalidku sameyn karo. Waxaan aaminsanahay in si uun mucjisada nolosha, Eebbe u oggolaado waalidiinta inay khalad kasta sameeyaan oo ay weli leeyihiin carruur waaweyn - illaa iyo inta aan ku jecel nahay qalbigeenna oo dhan iyo iyaga ka hor marinaa nafteena!
Waxaan fiiro gaar ah u yeelayaa nolosha una gudbi khaladaadka aan sameeyay si kuwa kale aysan u mari doonin ceebta!
Hirgelintaada ee Mawduuca Cutline waa cajiib. Waa mowduuc la yaab leh oo leh qaab juquraafi ahaan la hagaajiyay loona dhisay in si weyn looga faa'iideysto. Waxaan si gaar ah u jeclahay sida aad ugu isticmaashay CSS astaantaada iyo haadkaaga, laakiin aad u ilaalisay waxyaabaha ay ka kooban tahay Mashiinnada Goobidda si loo akhriyo Wanaagsan! Tilmaanta ugu horreysa waa adiga inaad ku darto a Khariidadda bogga, in kastoo! Kani waa khariidad loogu talagalay mashiinnada raadinta si ay si fudud ugu dhex wareegaan waxyaabaha ku jira boggaaga adigoon dhab ahaan isu muujin.
Waxyaabaha aan ugu jeclahay Sitemap Plugin waa nooca 3.0b7 ee Qalabka Google Sitemap. Anigu shaqsi ahaan waan u beddelay si aan ugu gudbiyo Yahoo! sidoo kale wuxuu u diray qoraaga lambarka laakiin kuma uusan dhisin sii deynta xigta wali. Waxaan rajeynayaa inuu ku dari doono.
Mar alla markii aad hesho khariidadda boggaaga, waxa xiga waa inaad ku cusboonaysiiso faylkaaga robots.txt meesha ay khariidaddu ku taal. Tani waa kudhowaad si cadaalad ah dhawaanahan loogu talagalay qeexida Khariidadda bogga, laakiin way fiicantahay in laga faa'iideysto hadda halkii laga noqon lahaa goor dambe! Waa tan sida ay tahay inay u ekaato:
Wakiilka isticmaalaha: * U diid: / wp- Khariidadda bogga: http://www.hamelife.com/sitemap.xml
Rory wuxuu si gaar ah u codsaday inaan taabto haddii ay tahay iyo in kale qaybta wax qorista ay tahay inay noqoto boggeeda u gaarka ah ama ay ka mid noqoto qalliinka. Waxaan u bixi doonaa habka wimpy-ga ah waxaanan dhihi doonaa waxaan u maleynayaa, ugu dambeyntii, taasi adiga ayey kugu xiran tahay. Si kastaba ha noqotee, waan fahmi karaa haddii dadku ay ka faalloodaan taas - maadaama labada mowduuc runtii aad u kala duwan yihiin.
Kaliya fikir, laakiin ma jirtaa wadiiqo aad ku samayso bog Barbaarinimo iyo bog Blogging ah oo dadku toos ugula socon karaan iyaga oo ay weheliyaan laba quudin, midkiiba midkiiba? Waxaan u maleynayaa in tan lagu guuleysan karo iyadoo la adeegsanayo aaladda loo yaqaan 'Tagging plugin' sida tan Ultimate Tag Warrior iyo ku calaamadin qoraal kasta "waalidnimo" ama "baloog garayn". Waxay qaadan kartaa xoogaa shaqo ah, laakiin runtii way fiicnaan lahayd!
Waxaan sidoo kale ogaaday markaan tijaabiyay URl, sida http://www.hamelife.com/parenting in bog 404 caadi ah soo baxo. Baadhid qoraalkayga ku saabsan u qaabeynta 404 bog - waxay u egtahay in la abuuro mashiinka raadinta ee bartaada.
Hamelife waa goob fiiqan leh waxyaabo aan qiimo lahayn. Rory wuxuu leeyahay xoogaa xeelado ah oo kor u qaadaya gacmihiisa sidoo kale. Ka fiiri menu-ga hamelife ee midigta sare… aad u gaar ah (iyo madadaalo!). Waad ku mahadsantahay inaad ii ogolaatay inaan tilmaamo bartaada, Rory.
Hadaad jeceshahay Bloggaaga Tilmaaman, si fudud u raac tilmaamaha aniga ku yaal Blog Tipping Post.
Tags: 404categorydiididnoloshaaaladoKhariidadda boggaWordPress
Sharaxaadda Shaqada ee Suuqgeynta VP
Jul 8, 2007 markay tahay 4:01 PM
Waad ku mahadsantahay inaad ii ogolaatay inaan tilmaamo bartaada, Rory.
Ma ciyaareysaa, Doug? Aad ayaan kuugu mahadnaqayaa inaad isha waxtarka leh ku tuurtay goobta. Waxaan ubaahanahay dhamaan talooyinka aan heli karo, runtiina waan ku faraxsanahay tilmaamayaasha aad siisay.
Marka hore, waxaan ku afuufay bogaadintiina. Aad baad u mahadsan tahay - si weyn ayey u dhiirrigelinayaan.
Hadda, waxaan la yaabanahay haddii aad iga caawin lahayd talooyinkaaga dheeriga ah:
Dhibic # 1 - M ee taamilife waxay u qaadeysaa soo booqde khariidadda bogga. Waxaan isticmaalay Khariidadda bogga oo loogu talagalay Cutline. Miyaan si sax ah u qaabeeyey? Mise waa inaan si toos ah ugu dhaqaaqaa tilmaanta # 2 oo aan si sax ah ugu hagaajiyaa robotyadeyda.
My robots.txt dhab ahaantii wuxuu akhriyaa:
Wakiilka isticmaalaha: *
Diido: / wp-content /
Diido: / wp-admin /
Diido: / wp-kujira /
Diido: / wp-
Diid: / quudinta /
Diido: / dib u socod /
Diid: / cgi-bin /
oo waxaan ku hayaa magaalada hamelife.com/wpblog/robots.txt. Wax uma muuqdaan wax sax ah tan - Waxaan dareemayaa inay tahay in meel kale laga helo, laakiin ma hubo sida loo sameeyo. Waan isticmaali karaa caawinta.
Aasaasteydu waa inaan lahaado blog-ka hamelife.com/wpblog, marka kuma lihi galka asalka. Waad arki kartaa sida wareerkani igu hayo!
Barta # 3 - Waad ku mahadsan tahay soo jeedintaada, waa inaan ka sii fikiro. Waxaan aad ugu tiirsanahay barta labaad. Waan ogahay inay la macno tahay haysashada laba waxyaalood oo fara badan, laakiin waxaan baranayaa inaan xoogaa dib u dhigo wax ku saabsan sheygan qorista - yaan la isku buuqin.
Qodobka # 4 - Waxaan eegay maqaalkaaga WordPress 404 sidaan u hadlayno. Waa talo aad uwanaagsan sida ugu dhaqsaha badana waan u fulin doonaa.
Mar labaad mahadsanid, Doug. Caawintaada waa la qadarinayaa.
Jul 8, 2007 markay tahay 4:41 PM
Waxaan kugula talin lahaa inaad galiso faylkaaga robots.txt galkaaga xididka. Waad heli kartaa wax yar oo qurxoon, in kastoo, oo aad meel dhigis u rogi karto faylkaaga .htaccess.
Toosixi aalado.txt http://hamelife.com/wpblog/robots.txt
Weli waxaan dhigi lahaa khariidadda bogga ee 'XML' iyo sidoo kale anigoo adeegsanaya sheyga aan ku qeexay 1. Khariidadda bogga ee 'XML' waxay kuxirantahay istaandarka bogga. Khariidadda degelku waxay dib u dhis ku samayn doontaa boosteejo kasta oo si toos ah ayeyna ping gareeysaa makiinadaha raadinta sidoo kale. Waa wax aad u fiican.
Haddii aad geliso khariidadda bogga oo ay ku jirto buugga wpblog sidoo kale, waxaad sidoo kale u dhigan kartaa dib u habeyn sidoo kale:
Toosi toos ah khariidada bogga. Xml http://hamelife.com/wpblog/sitemap.xml
Isticmaal taxaddar iyo kaydinta feylkaaga htaccess (waa qarsoodi kartaa sidaa darteed hubi inaad ku aragto faylasha qarsoon barnaamijkaaga FTP) haddii aad xirto!
Markaa hubi inaad kudartid khariidadda bogga bogga faylashaada robots.txt. Haddii aad haysatid khadadka dib-u-habeynta ee kuugu jira faylka htaccess, waad isticmaali kartaa midkood URI… Waxaan u maleynayaa in aan u dhigmayo suugaanta, in kastoo:
Jul 8, 2007 markay tahay 4:19 PM
Waxaan hadda hirgaliyay 404.php-kaaga, Doug.
Iskuday tan: hamelife.com/child
Haddaba, taasi bog kafiican 404!
Mar labaad - Mahadsanid badan.